Ukufaka okanye ukulungiswa kweNkqubo yokuFafaza? Yintoni ekufuneka uyazi kuqala - Indlela Yokuphila
Ukufaka okanye ukulungisa iNkqubo yokuFafaza Yintoni ekufuneka uyazi kuqala
Imifanekiso ka-Getty / Alice Morgan
Ukuba uluncedo xa ujikeleza indlu (okanye ufuna ukuba njalo!), Ungafaka eyakho ingca yokuchela ukuze ugcine imali. Kukuphela kobunzima be-DIY spectrum, kwaye kuphela malunga neepesenti ezili-10 zabanini bamakhaya abahlala bezenza ngokwabo, utshilo uDave Holmes, umqeqeshi weshishini lokuthengisa amalungelo Imihlaba Guys . Kodwa ungonga imali kuba ufakelo oluqhelekileyo lwekhontrakthi lunokuqhuba i-500 ukuya kwi-900 yeedola kwindawo nganye.
Nantsi into ekufuneka uyiqwalasele ukuba ufuna ukufaka eyakho inkqubo:
Yenza uvavanyo lwenyani
Ukuba awukuthandi ukujija ngamanani okanye ukumba imisele (ewe, kuya kufuneka umbe ukufaka ipayipi kunye neentloko zokuchela!), Ngekhe ufune ukujongana nale projekthi ngokwakho. Sihlala sibona abaninimzi beqala kwaye kufuneka babize ubuchwephesha kuba abaqinisekanga ngendlela yokusombulula ingxaki, utshilo uHolmes. Kodwa ukuba uyaphumelela kwiinkcukacha, yinto enokwenziwa — nangona iyavuma ukuba inzima.
Yila inkqubo yakho
Uya kudinga ukulinganisa kunye nemephu imimandla ukufumanisa ukuba umbhobho kunye nolawulo kufuneka luye phi kwipropathi yakho. Abanye abavelisi, abanjengo Umvumbi wemvula , unikezela ngenkonzo yoyilo yasimahla yokuhambisa inkqubo ngelixa ezinye, ezinje Umzingeli , Iividiyo kunye nezikhokelo kwiiwebhusayithi zazo. Ezi zizibonelelo ezilungileyo kuba ayingomsebenzi olula Bala izinto ezithile ezinje ngesithuba sokuchela esifanelekileyo, iintlobo zokuchela , kunye namazinga esicelo esisebenzayo samanzi ukufezekisa ukugubungela okufanayo, utsho uHolmes. Okona kuncinci, uya kufunda ukuba yeyiphi imibuzo oza kuyibuza ukuba ngaba ugqiba kwelokuba uqeshe ikontraka.
Yenza umsebenzi wesikolo
Ngaphambi kokuthenga izinto, kuya kufuneka uphinde uchonge uxinzelelo lwamanzi ekhayeni lakho , ubungakanani bemitha yamanzi, nokuba a Ukuthintela ukubuya umva Iyafuneka kwidolophu yakho. Ikwangumbono okrelekrele ukukhangela kumasipala wakho ukubona ukuba uyayifuna na imvume yokufaka inkqubo. Awufuni kungena kwisiqingatha seprojekthi kwaye uhlawuliswe ngenxa yokuba ungakhange utsale imvume efanelekileyo.
Asinakugxininisa koku ngokwaneleyo: Qinisekisa ukuyifumana irhasi, umnxeba, intambo kunye nemigca yogutyulo ngaphambili umhlakulo wakho uhlaba; tsalela umnxeba iinkampani zakho eziluncedo ukuze zimakishe imigca ngaphambi kwexesha. Unokuqesha i-trencher ukunciphisa ukumba ngesandla, kodwa ngamanye amaxesha akunakulindeleka ukuba usebenze ukuze uyidinge kangangeentsuku ezininzi kwiiprojekthi ezininzi.
Landela uyilo loyilo ukumba imisele. Nje ukuba umbe imisele, eqhelekileyo kufuneka ibephakathi kwe-8 ukuya kwi-10 ye-intshi ubunzulu kwaye malunga nee-intshi ezi-4 ububanzi, beka umbhobho emseleni uze ulingane neziphelo kunye. Ukuba usebenzisa i-PVC (ngesiqhelo kwimozulu eshushu), i-primer kunye ne-solvent weld-igama elithandekayo leglu-lixubha kwisiphelo ngasinye sombhobho. Ukuba usebenzisa umbhobho we-polyethylene obhetyebhetye (odla ngokusetyenziswa kwimozulu ebandayo), uzakufuna izihlanganisi ezizodwa. Qhoboshela izinyusi, kulapho indawo nganye yokuchela izakubekwa khona, emva koko ujije iintloko zokuchela kwiziphuphuma.
UGiacomo AugugliaroImifanekiso kaGetty
Qhagamshela kumthombo wamanzi
Uninzi lweengcali zicebisa ukuba uqeshe i-plumber okanye i-installer yokunkcenkceshela ubuncinci le nxalenye yofakelo, efuna ukuba ubonelelo lwamanzi oluphambili luvaliwe, ukufakwa kobhedu kufakwe phakathi komgca wamanzi wendlu kunye netephu engaphandle. Ivalve yokuvala nayo kufuneka ifakwe, kunye nesithintelo sokubuyela umva, ukuba kufuneka njalo. Vavanya inkqubo yokuvuza ngaphambi kokugcwalisa umhlaba kwimisele.
Zama ezinye iindlela zokunkcenkceshela
Ukuba konke oku kubonakala kunzima, iinkampani ezinje ngeRainbird ngoku zenza iintloko zokutshiza ezilula kakhulu ezincamathisela ithumbu lakho legadi yengca encinci. Into efunekayo kukumba umngxunya ongapheliyo weentloko, emva koko uncamathisele kwaye uhambise umbhobho wegadi yakho njengoko kufuneka. Okanye cinga ukusebenzisa ukunkcenkceshela , ezinje ngeetela zesepha, kwiindawo ezithile ezinje ngeebhedi zegadi; Olu hlobo lokunkcenkceshela luzisa amanzi ngqo kwiingcambu.
Buyisela nokulungisa izitshizi xa kufuneka
Iindaba ezimnandi: Ukulungiswa akufane kube nzima njengofakelo! Yintoni eqhelekileyo? Intloko yesitshizi eyaphukileyo eyonakaliswe kukucheba ingca okanye umcuphi womtya, utshilo uHolmes. Umphezulu wentloko endala kufuneka unolwazi olufunekayo ukuthenga intloko yokubuyisela. Emva koko sebenzisa umhlakulo omncinci wokumba okanye itawuli yesandla ukumba ujikeleze intloko eyaphukileyo, malunga nee-intshi ezi-6 ukuya kwezi-12 ubunzulu, ulumke ungagqabazi umgca wamanzi.
Khulula intloko endala ngokujija okanye ukusebenzisa isitshixo sokutshixa isitshixo ukuyiguqula ngokungqinelana newotshi kunye nokususa. Qinisekisa ukuba awufumani naluphi na ukungcola kumgca ovulekileyo. Ngoku jika intloko entsha endaweni, vavanya ukuvuza, buyisela umhlaba, kwaye uhlengahlengise ipateni yakho yokutshiza usebenzisa isixhobo esincinci esiza nentloko, utsho uHolmes. Iintloko nazo ngamanye amaxesha ziyavaleka ngenxa yokungcola okanye igrabile, ke ukuba unayo enye etshiza i-funky, yicofe, njengasentla, uyihlambe, kwaye uyijike ubuyele endaweni yayo.
Yintoni oyifunayo ekufakweni kwe-Sprinkler
Nantsi indlela yokwenza uMhla wokuQala uJoanna Gaines-Uhlobo lweNdaba engaziwayo yeLokhwe kaJackie Kennedy yomtshato
IiPops ezintsha zeStarburst zineziko elihlaziyiweyo, elineziqhamo
Izinto ezi-7 ekufuneka uyazi malunga noMgangatho weBrick
Ukuhlamba ngaphandle kungaliphinda kabini ixabiso lakho lasekhaya
Into omele uyazi NgeChinoiserie
Guqula lonke udonga lube yibhodi yokuCima okuMileyo
I-411 kwiiPaneli zoSolar zophahla lwelanga zikaTesla
ixilongo leovali yombhoxo weofisi
igumbi lokuhlala losapho lwanamhlanje
imibala yepeyinti engathathi hlangothi ngo-2018
iflip abantu okanye iflop
izimvo zelf eshalofini